UVeer Patel, uMbhali e-NJ & NY kwiarhente yeZindlu, eKhangela, uKhuselo lweNqanawa kunye namaGqwetha asebambisayo
ikhaya / I-Veer Patel
Kwenzeka ntoni emva kwenkomfa yolawulo lwamatyala e-Foreclosure e-New Jersey?
Julayi 31, 2018 Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew YorkUshiye uluvoI-Veer Patel
Kwenzeka ntoni emva kwenkomfa yolawulo lwamatyala e-Foreclosure e-NJ?
Ngeli xesha, uyazi okanye igqwetha lakho sele sele likhuphe oko kubizwa ngokuba yimfuno yokufunyanwa, imibuzo yophando, kunye nokwamkelwa. Oko kukuthi ukuba i-NJ yakho ...
Novemba 17, 2017 Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew YorkUshiye uluvoI-Veer Patel
Ilungelo loKhululo kwiLizwe laseNew Jersey
Eli nqaku lifuna ukubonelela ngenkcazo emfutshane ngamalungelo okuhlangula eNew Jersey xa bexelwa kwangaphambili. Ayisiyo yonke imithetho ephindayo yokuhlawulelwa kwaye akufuneki kuthembelwe kuyo ...
Ngubani ofumana isheke yerenti? -Ukhetho loMamkeli weRhafu
Matshi 10, 2016 AkohlulwangaUshiye uluvoI-Veer Patel
Xa ungumnini wepropathi eqokelela irente eNew Jersey, kwaye uye ekuboneni, ngaba ibhanki okanye umbolekisi unelungelo lokurenta? Ukuba kunjalo, kuqhubeka njani ukuyifumana? Ngaba ungabanqanda?
Izizathu ze10 Kutheni ufuna umyolelo eNew Jersey.
Matshi 7, 2016 AkohlulwangaUshiye uluvoI-Veer Patel
Umyolelo uyakuqinisekisa ukuba izinto zakho ziya kusiwa ngendlela othanda ngayo. (Unzinzi lwendawo.) Ngaphandle komyolelo, umthetho uthatha isigqibo sokuba ngubani ...
Ngaba kufuneka ndihlaziye isicwangciso sam sendlu eNew Jersey?
January 1, 2016 AkohlulwangaUshiye uluvoI-Veer Patel
1. Qwalasela naluphi na utshintsho olukhulu kubomi bakho okoko wagqibela ngokuhlaziya isicwangciso sendlu yakho.
Ngaba kufanelekile ukuba ndiphendule impendulo kwityala lokuchazwa kweNew Jersey?
Novemba 6, 2015 AkohlulwangaUshiye uluvoI-Veer Patel
Kubaluleke kakhulu ukuba ufake ifayile ngaphakathi kwexesha elimiselweyo yimithetho yenkundla yaseNew Jersey.
Abathengi bandibuza lo mbuzo ngalo lonke ixesha. Kubaluleke kakhulu ukuba ufayile ...
Icandelo le-2-Ushwankathelo olufutshane kunye neSikhokelo soLwaziso loKhuseleko kwiNkulumbuso eNew Jersey kwiNkundla ePhakamileyo
Septemba 3, 2015 AkohlulwangaUshiye uluvoI-Veer Patel
Isikhokelo sokuBoniswa eNew York
Eli nqaku liyaqhubeka ukusuka kwiCandelo le-1, ukujonga ngokufutshane isikhokelo kunye nesikhokelo sokuchazwa eNew Jersey. Eminye imvelaphi yenkampani - siyiqendu lomthetho wokuzikhusela esibonisa ukusebenza kwesiXeko saseJersey ...
Ushwankathelo olufutshane kunye nesiKhokelo kuKutyhilwa koLwazi loKhuseleko e-New Jersey kwiNkundla ePhakamileyo
Juni 23, 2015 AkohlulwangaUshiye uluvoI-Veer Patel
Xa kuthelekiswa namanye amagunya, ngakumbi iNew York, abagwebi baseNew York bamisela iishedyuli ezinzima zokubonisa isimangalo kwindawo ephezulu ...
Ngaba unayo into oyifunayo kunye nokuPhila koMzimba ukuze uqhelisele umthetho eNew York naseNew Jersey
Juni 15, 2015 AkohlulwangaUshiye uluvoI-Veer Patel
Ngaba unexhala malunga nokuba yintoni na ijezi New okanye <isitayile eskan = "Ukuhonjiswa kokubhaliweyo: ...
Ngaba bacebisi eScumbag eNew York?
Juni 12, 2015 AkohlulwangaUshiye uluvoI-Veer Patel
Ngaba wakhe uvakale ngathi ulwa negqwetha le-scumbag? Ayinguye wonke umntu kwiprofessional esemthethweni enobuchule njengoko kufunwa yi imigaqo ...
Ngaba uyayifuna igqwetha likaMitchell-Lama? Yintoni kanye kanye i-NYC Mitchell-Lama Gqwetha?
Juni 10, 2015 AkohlulwangaUshiye uluvoI-Veer Patel
Ngaba uyayifuna igqwetha laseMitchell-Lama kwisiXeko saseNew York? Yintoni kanye kanye i-NYC Mitchell-Lama Gqwetha?
Oku kunokuvakala njengokuqala kwincwadi kaGqr Seuss okanye enye kwi U-LLama LLama Mad ku-Mama ...
Ukutshintshwa kwemalimboleko entsha yaseJersey ngelixa ukuDalulwa
Juni 5, 2015 Akohlulwanga1 CommentI-Veer Patel
Ukulungiswa kwemalimboleko kufumaneka kokubhengezwa kwangaphambi kokubini kunye nangexesha langaphambili. Ukuxela ukubhengezwa njengongenamali e-New Jersey kuya kunyanzela ibhanki ukuba isebenze nawe ukuLungiswa kweMali mboleko. Okuninzi...
Juni 4, 2015 AkohlulwangaUshiye uluvoI-Veer Patel
Xa nje uluntu selithe lazixabisa ixabiso lomntu, kukho into eyomeleleyo ekufuneka yenziwe yokuba uluntu lungavumeli mvume kuphela, kodwa kufuneka lukhuthaze, loo mntu enze igalelo elifanelekileyo kuluntu. "
Ngamana 30, 2015 AkohlulwangaUshiye uluvoI-Veer Patel
Ukubanjwa kokuSuswa njengoko kuchaziwe yiGqwetha laseNew Jersey lokuFudukela kwelinye ilizwe
Le vidiyo ineGqwetha laseNew Jersey lokuFudukela kwelinye ilizwe linikezela ngamagqabantshintshi amafutshane okubanjwa kokususwa kubafakizicelo. Ukuba unemibuzo kwaye ufuna uku ...
Ngomnye umhla wokugqibela u-Asylum njengoko kuchaziwe ngummeli we-New Jersey Immigration Lawyer
Le vidiyo inika isishwankathelo esifutshane sebha yonyaka omnye wabenzi bezicelo asylum. Le bar inokoyiswa ngokuxhomekeka kwiimeko ezithile. Ukuba u...
Ngamanye amaxesha ukufumana idilesi yenkundla kamasipala akukho ngqo ngaphambili okanye kulula njengoko kufanele kube njalo. Apha ngezantsi kukho amakhonkco ohlobo lwe-intanethi lwoluhlu lweNkundla kaMasipala wase-Essex County.
Ulawulo lwe ...
I-New Jersey Landlord Tenant Order yokubonisa oonobangela yintshukumo yongxamiseko.
Ngaphandle kokuthetha njengeGqwetha leMihlaba eliNtsha laseJersey, imicimbi yabahlaseli ivela rhoqo rhoqo. Le vidiyo iza kuxoxa "ngeemeko zokuxakeka," ezokuthi ...
Ukuba ngummi waseLizweni- igqwetha leJaji laseJersey
Ngamana 30, 2015 I-New Jersey ImmigrationUshiye uluvoI-Veer Patel
Igqwetha elitsha lokufudukela kwelinye ilizwe laseNew Jersey lichaza ukuba ngummi
Thetha negqwetha laseMelika lokuThuthela ngaphambi kokungenisa nantoni na
Ndiyayiqonda imiba abajongana nayo abantu abeza eUnited States. Wonke umntu uneempawu ezizodwa ...